Kukwidzwa kweMutengo weDhata Kwotsamwisa Vakawanda
Vanhu vakawanda munyika vari kugunun’una pamusoro pedanho rekukwidza mitengo wekushandisa indaneti panharembozha kwaitwa namakambni enharembozha.
Izvi zvinotevera danho rakatorwa neboka rePost and Telecommunications Regulatory Authority, kana kuti POTRAZ rekuti mitengo iyi ikwidzwe.
Mupfungwa dzavari kupa paFacebook, paTwitter nepaWhatsApp, vanhu vakwanda vari kushora danho rePOTRAZ iri vamwe vachiti iyi inzira yehurumende yekuedza kumbunyikidza kodzero yekutaura pachenamunhu akasununguka, vamwewo vachiti danho iri inzira yehurmende yekutsvaga nayo mari nedemo.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Youth Development Trust, VaBhekumusa Moyo, vanoti zvinoshamisa kuti Potraz yatora danho rinoita kuti veruzhinji vadhurirwe nekushandisa internet apo dzimwe nyika dzose pasi rose dziri kuita kuti veruzhinji vakwanise kushandisa indaneti pachena.
Mazuva mashoma apfuura, Potraz yakazivisa kuti yaive yatora danho rekuti hapana kambani yenharembozha inofanirwa kubhadharisa mutengo uri pasi pe12 cents pamineti imwe chete pakutaura panharembozha uyewo kuti mitengo yeindaneti haifanirwe kuve pasi pe 2 cents pa mega byte yega yega.
Mushure medanho iri makambani enharembozha eEconet neTelecel abva akwidza mitengo iyi uye kambani yehurumende yeNet One inotarisirwawo kukwidza mitengo yayo chero ipi nguva.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuPotraz panyaya iyi asi mukuru wePotraz, VaGift Machengete, vakaudza rimwe bepanhau rehurumende kuti kukwidzwa kwemitengo uku kwaitwa mushure mekutaurirana pakati peboka ravo nemakambni eharembozha ari munyika.
VaMachengete vakati nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakakomberedzwa nedzimwe, iri kure nemahombekombe egungwa panosvikira tambo dzinoshandiswa kufambisa masai sai einternet izvo vakati zvinoitawo kuti kushandisa internt kudhure munyika.
Asi mumwe mugari wemuBulawayo, Muzvare Vimbai Moyo, vaudza Studio 7 kuti zvinoshamisa kuti mari yekushandisa indaneti muZimbabwe iri kuramba ichikwira asi kune dzimwe nyika ichidzika.
Mupepeti webepanhau repainternet reTechzim, VaSoul Kabweza, vaudza Studio 7 kuti danho rePotraz rinogona kuve rakaitwa nechinangwa chekuda kuti hurumende iwane mari kubva kumitero inobhadhariswa makambani enharembozha.
Asi VaKabweza vati mari inotarisirwa kuwanikwa nehurumende iyi inogona kuzove shoma kana vanhu vave kushandisa indaneti zvishoma nekuda kwekudhurirwa.
Vachipindura mibvunzo kubva kuvanhu vakawanda pamusoro pedanho rePotraz paTwitter pavo, gurukota rehumhizha hwekufambiswa kwamashoko, VaSupa Mandiwanzira, vati havana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vari pazororo.
Gore rakapera Potraz yakakonzerazve mutauro apo yakatora danho rekuti makambani enharembozha asaite zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuderedza mitengo.